तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको सपना नारी तिथि गर्न चाहनुहुन्छ? चींटियों सिक्नुहोस्
कति पटक यो तपाईं के भएको छ? तपाईंको मित्र र तपाईं एक पल्ट मा खडा छन् र तपाईं एक आकर्षक स्त्रीको देख्न. तपाईं dibs कल र त्यसपछि एक लाइन संग आउन असफल. तपाईं स्त्रीले लाइन सुन्न चाहन्छ तर त्यसपछि महसुस गर्न सक्छन्, राम्रो, तपाईं जिब्रो स्थानमा छन्. बरु तल्ला गर्न सक्षम भएको तपाईं अन्त स्त्रीको आफ्नो मित्र फिदा रही, "बिल्ली आफ्नो जिब्रो मिल्यो?"
हरेक मानिस स्कूल मा क्रश को आफ्नो अंश भएको छ. उनको बाहिर ले - आफ्नो जीवन मा पनि तपाईं त धेरै गर्न चाहन्छु भनेर यो केटी थियो, फिल्म जाने, हात पकड र सामान्यतया एक महान समय छ. तर तपाईं साहस सारांशमा कहिल्यै सक्छ - या त तपाईं एकदम राम्रो छैन लाग्यो वा तपाईं सधैं स्कूल अदोनिस को काखमा आफ्नो सपना महिला देख्थे. अनि तपाईं मनमनै माथि दिनुभयो, केवल उनको र सुस्केरा सोचिरहेका.
पूर्ण विषय परिवर्तन - तपाईं कमिलाबाट थाह के? तपाईं साँच्चै यी साना कीराहरू कुनै पनि विचार दिएको छैन, तपाईं? तपाईं चींटियों एक कलोनी देख्दा आफ्नो मनमा आउछ पहिलो कुरा तिनीहरूलाई BASH छ.
तर तपाईं कमिलाबाट पनि हामीलाई तल्ला एक महिलालाई अत्यावश्यक जीवन पाठ सिकाउने थाह पाउँछौं? यो कसरी हेरौं.
ऐन #1 - कुराहरू लागि प्रतिक्षा नगर्नुहोस्
चींटियों कदम मा लगातार गर्दै छन्; तिनीहरूले सधैं कुरा गरिरहेका छन्. आरोप लिने अधिकांश महिला प्रेम मानिसहरू. तपाईं आफ्नो सपना स्त्रीको लागि प्रतीक्षा राख्न भने तपाईं आउँछन् र प्रेम प्रस्ताव, त्यसपछि के तपाईं जस्तै सबै भन्दा बिर्सन पनि सक्छन्. तपाईं तल्ला गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो महिला केवल उनको सम्म हिंड्न र तपाईं उसलाई रुचि भन्न. खराब मामला परिदृश्य मा त्यो कुनै भन्नेछन्.
ऐन #2 - परित्याग नगर्नुहोस्
तिनीहरूले आफ्नो गन्तव्य चिन्छु र तिनीहरूले असफलता र अलमल्याउने बीचमा यो पुग्न - चींटियों अन्त्य छैन. तपाईं आफ्नो पहिलो अस्वीकृति थियो? चिन्ता नगर्नुहोस्; यो जीवन को अन्त छैन. प्रयास फेरि ... ती चलचित्र नायक अन्ततः तिनीहरूले समय अस्वीकार र फेरि थिए गर्दा पनि उनको महिलाहरु woo गर्न व्यवस्थित भनेर विचार.
ऐन #3 - हुनुहोस्
चींटियों लक्ष्य र विशेष ध्यान छ - तिनीहरूले मर्न बाध्य गर्दै छन् harsher पटक उद्धार गर्न सक्दैन भने तिनीहरूले थाह. तपाईं एक महिला चाहनुहुन्छ भने तपाईं फिर्ता रही राखन तल्ला चाहनुहुन्छ उनको. तपाईँ आफ्नो रेखा र शैली परिवर्तन सुनिश्चित.
ऐन #4 - आफ्नो लाइनहरु बचत
चींटियों आफ्नो खाना खाने र तिनीहरूले केही बचत. जहाँसम्म स्त्री कुरा छ तपाईं मा एक जाने सबै आफ्नो चुनावी सूत्र खाली हुँदैन. अनौठो हुनुहोस्; रचनात्मक हुन र मूल हुन र अन्ततः त्यो तपाईंकै हुनेछ.
कमिलाबाट नगण्य छन् कि अब महसूस, तपाईं छन्? हो, तिनीहरूले हामीलाई जीवनको धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउने, उनको गरेकी एक महिला को आकर्षित गर्न सक्षम भएको सबैभन्दा आदिम एक सहित. बस तपाईं तल्ला गर्न चाहनुहुन्छ यो महिला छन् भने यहाँ कमिला जस्तै व्यवहार. आफ्नो सपना स्त्रीको अर्को अदोनिस बितेर whisked छ रूपमा तपाईं अझै पनि सुस्केरा छन् भने त्यसपछि फिर्ता आउन र भन्नुहोस्.